ပထမလှိုင်းထက် အဆ(၉၀)ပြင်းထန်ပြီး ကူးစက်မှုပိုမြန်တဲ့ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းနဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများ – Ever Best
ပထမလှိုင်းထက် အဆ(၉၀)ပြင်းထန်ပြီး ကူးစက်မှုပိုမြန်တဲ့ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းနဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများ
By Ever BestPosted on September 28, 2020 September 28, 2020
ပထမလှိုငျးထကျ အဆ(၉၀)ပွငျးထနျပွီး ကူးစကျမှုပိုမွနျတဲ့ ကိုဗဈဒုတိယလှိုငျးနဲ့ ပေါ့ဆမှုကွောငျ့ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူမြား
စာအရှညကွှီးရေးဖို့ အခှိနမွရတာရယွ မအားတာရယကွှောင့ွ လိုတိုရှငွး ရေးလိုကပွါတယွ.. ကိုဗဈပထမလှိုငွးနဲ့ ဒုတိယလှိုငွး ဟာ နှိုငွးယှဉလွိုကရွငွ အဆ ၉၀ ကှာပါတယွ.. ဘယလွိုကှောငွ့ပါလိမွ့ဆို ရှငွးပါ့မယွ… ပထမလှိုငွးမှာ လူနာစတှေ့သညွ့ မတလွ ၂၃ မှ လူနာ ၃၇၄ ယောကဖွှဈဖို့ ၂၁ ပတကွှာပါတယွ တဈပတကွို ၁၆ ယောကနွှုနွးဖှဈပါတယွ.. သို့သောွ ဒုတိယလှိုငွးစတငသွညွ့ လူနာ ၃၇၅ မှ ၉၉၉၁ ဖှဈဖို့ ၆ ပတပွဲကှာပါတယွ တဈပတကွို ၁,၆၀၃ ယောကွ ပိုးတှေ့ပါတယွ ဒါဆိုအဆ ၉၀ ကှာတာသိလောကပွှီထငပွါတယွ.
ထို့နညွးတူပထမလှိုငွးမှာ သသေူ ၆ ယောကပွဲရှိပမေဲ့ ဒုတိယလှိုငွးမှာ ယခုအခှိနအွထိသသေူ ၁၉၂ ယောကရွှိပါတယွ.. သသေူ စုစုပေါငွး ၁၉၈ ယောကကွို ခှဲခှမွးစိတဖွှာကှညွ့လှှငွ ၆၀ အထကွ ၁၃၇ ယောကရွှိပှီး စုစုပေါငွးသဆေုံးသူ၏ ၆၉% ရှိနတောကို တှေ့ရမှာပါ.. အမှိုးသားသဆေုံးမှုကအမှားဆုံးဖှဈပှီး ၁၂၈ ဦးရှိကာ ၆၅% ရှိပါတယွ.. အမှိုးသမီး သဆေုံးမှုက ၇၀ဦးရှိပှီး ၃၅% ရှိပါတယွ ကှားမ သဆေုံးမှုအခှိုး ၂:၁ ဖှဈပါတယွ
ဒီနရောမှာ အသကွ ၆၀ အထကသွဆေုံးသူတှဟော အပှငထွှကလွို့ အုပစွုဖှဲ့စားသောကလွို့ social gathering ဆောငရွှကလွို့မဟုတပွဲ မိသားစုဝငတွှဆေီက ကူးစကခွံရတာ ဖှဈကှောငွးလဲ ဝမွးနညွးဖှယရွာ တှေ့ရှိရပါတယွ.. နဂိုထဲက အသကကွှီးသူ နောကခွံရောဂါရှိသူဟာ အနတြရာယရွှိကှောငွး US CDC ကတှေ့ရှိခကှကွို အကယှရွေးပှပှီးဖှဈပါတယွ.. သဆေုံးရတဲ့အဓိက အကှောငွးရငွးမှာလညွး ဆေးရုံအရောကနွောကကွတှာ တခှို့ဆို သပှေီးမှ အလောငွးအဖှဈနဲ့ဆေးရုံရောကရွာက ဓာတခွှဲနမူနာယူပှီးစဈလို့သာ ပို့တှေ့မှနွးသိရတာဖှဈပါတယွ.. ဒီနရောမှာ သသေူအားလုံးဟာ အသကကွှီးသူတှေ နောကခွံရောဂါရှိသူတှပေဲ မဟုတကွှပါ ဘာမှရောဂါမရှိတဲ့ အသကငွယသွူတှလေဲ သနကှတေောတှေ့နရပေါတယွ ဒီတော့ကာ ငါ့မှာဖှဈရငတွော့ သကသွကသွာသာလေးပဲ ဖှဈမှာပဲလို့ ကိုဗဈနဲ့ စာခှုပခွှုပထွားတာ မဟုတတွဲ့အကှောငွး အထူးသတိပှုစခငှပွေါတယွ
ဒီတော့ကာ ပှညသှူတှကေို မတှတောနဲ့ သတိပေးလိုတာကတော့ မိမိရဲ့ မိဘ ဘိုးဘှား တှကေို ခစှခှငတှယှ မှတနှိုးတယှ တနဖှိုးထားတယဆှိုရငှ မိမိတို့ကိုယတှိုငကှ ရောဂါကူးစကခှှငှးမခံရလအေောငှ ပှုမူနထေိုငဖှို့ အထူးအရေးကှီးလှပါတယှ ဒီမိဘ ဘိုးဘှားတှဟော သူတို့တှရေဲ့ငယရှှယနှုပှိုတဲ့ဘဝ တှေ အခှိနတှှကေို မိမိတို့အတှကှ ရငှးနှီးမှှုပနှှှံငှပှး မိမိတို့ ဒီလိုလူလားမှောကလှာအောငှ ပှုစုစောငှ့ရှောကခှဲ့တယဆှိုတာ မမေ့သငှ့ပါ ဒီအခှိနမှှာ မိမိတို့က တပှနတှလှညှ့ ကှေးဇူးသိတတရှမှာဖှဈပါတယှ ဒါ့ကှောငှ့မို့ ခုအခှိနမှှာ ဘယလှိုပုံစံအမှိုးအစားဖှဈဖှဈ စုစညှးမှုတှေ အဖှဲ့လိုကဆှောငရှှကမှှုတှေ မလုပဆှောငသှငှ့ပါဘူး စဉှးစားပါ တှေးခေါပှါ ဦးနှောကပှါတာ ဘာလုပဖှို့ထားတာလဲ တှေးခေါတှတပှါစေ ကံကိုယုံ ဘာလို့ဆူးပုံနငှးမှာလဲ လကရှှိအခှိနမှှာ သငတှို့ကိုကုသမှုပေးနတေဲ့ ကနှှးမာရေးဝနထှမှးတှဟော သူတို့ရဲ့မိဘတှေ သားသမီးတှကေို ပဈပှီး သငတှို့အတှကှ စောငှ့ရှောကမှှုပေးနတောဖှဈပါတယှ အနတှရာယရှှိတဲ့အနအထေားတရပမှှာ တခှို့သူတှေ ရောဂါကူးစကခှံနရတောလဲ ရှိနပေါတယှ ဆရာဝနှ/ဆရာမ ကနှှးမာရေးဝနထှမှးတှေ ထိခိုကမှှုမှားလာရငှ သငတှို့ကို ဘယသှူက ကုသမှုပေးမှာပါလဲ..
ဒါ့ကှောငွ့ သငတွို့မိသားစုကို ခစှတွယွ တနဖွိုးထားတယွ မှတနွိုးတယွ မိသားစုတှေ အတူတကှ ပှောရွှှငစွှာ နလေိုတယဆွိုရငွ ခမှှတထွားတဲ့စညွးကမွးတှကေို တသဝမတေိမွး လိုကနွာပါ ဒါမှသာ ရောဂါကူးစကမွှုသံသရာကို ဖှတတွောကနွိုငပွှီး ဖှဈပှားကူးစကသွဆေုံးမှုမှ အမှနဆွုံး လှှော့ခနှိုငမွှာပါ.. လောကမှာ ကိုယွ့အသကထွကဘွာမှတနဖွိုးမရှိပါ ကနွှးမာရေးကောငွးမှနဖွို့ က နံပါတွ ၁ အရေးအကှီးဆုံးဖှဈပါတယွ ကနွှးမာရေးကောငွးမှနမွှသာ မိမိဆနဒြရှိတဲ့အတိုငွး အရာရာ အကောငအွထညဖွောနွိုငမွှာဖှဈပါတယွ.. လကရွှိအခှအနမှေော ကမဘြာပေါမွှာ စုစုပေါငွးပိုးတှေ့လူနာ ၃၃ သနွးနီးပါး (သိနွး ၃၃၀) နဲ့ သဆေုံးသူ ဆယသွိနွး ပှညွ့တော့မှာဖှဈပါတယွ သဆေုံးသူတဈယောကခွငွှးဆီမှာ မိသားစုတှေ ရှိတဲ့အတှကွ မိသားစုတှအတှကေတွော့ ၁၀၀ ရာနှုနွး ဆုံးရှုံးမှု ဖှဈတာမို့ အတငွ့မရဲကှပါနဲ့..
ခုလကရွှိရငဆွိုငနွရတောက အဖကှစွှမွးအား ကှီးပှီး ရုပပွှောငွးရုပလွှဲမှနဆွနလွှနွးလှတဲ့ အဏုဇီဝပိုးငယလွေးဖှဈပမေဲ့ လုံးဝ အထငသွေးလို့မရ လှှော့တှကလွို့မရတဲ့အခှအနမေေို့ မိမိတို့လူသားတှအနနေေဲ့ အမှနဆွုံးအနိုငရွရှိဖို့ ကမဘြာသူကမဘြာသားအားလုံးက အားကှိုးမာနတွကကွှိုးစားတိုကထွုတနွကှခှေိနမွှာ မကနှရွဈစပေဲ မှနမွာနိုငငွံသူ/သားအားလုံးက အတူညီညှတစွှာနဲ့ ပါဝငကွှစို့လား.. ဒီအခှိနမွှာ နီခှငွး စိမွးခှငွး ဝါခှငွး ပှာခှငွး ထကွ မှကှေီးအောကွ မိမိအပါအဝငွ မိမိမိသားစု မရောကဖွို့ အထူးအရေးကှီးနခှေိနဖွှဈပါတယွ သမငွေးက လကတွကမွးမှာပါ မပေါ့ဆကှပါနဲ့တော့ ဒါဟာနှလုံးသားနဲ့ရေးတဲ့စာဖှဈပါတယွ..
Previous post သီချင်းလေး နဲ့ ချစ်စရာအမူအရာမျိုးစုံလုပ်ပြနေတဲ့ နေခြည်ဦး ရဲ့ ဗီဒီယို
Next post အင်အားအကုန် စုစည်းပြီး တိုက်တော့မယ့် ရန်ကုန် ကိုဗစ်စစ်မျက်နှာပြင်က အဆုံးသတ် တိုက်ပွဲ
ဘစ်ကီနီဝတ်လေးတွေနဲ့ အမိုက်စားပိုစ့်ပေးပြီး အပြတ်လန်းနေတဲ့ ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ